Budata Privacy Eraser Free maka Windows
Budata Privacy Eraser Free
Free Budata maka Windows (4.80 MB)
Budata Privacy Eraser Free,
Nzuzo Eraser Free bụ mmemme dị oke elu yana nke zuru oke nke ị nwere ike iji hichapụ ihe omume niile ị mere na kọmputa gị. Mmemme a na -enyocha kọmputa gị ma na -enye gị ohere ịchọta ma hichapụ adreesị weebụ mbụ, paswọọdụ echekwara, faịlụ ndekọ, faịlụ nwa oge na ọtụtụ ndị ọzọ na -arụ ọrụ nke ọma.
Ị nwere ike ihichapụ akụkọ ihe nchọgharị gị nụzọ dị mfe na ngwa ngwa maka mmemme na -akwado ihe nchọgharị niile ama ama dịka Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari na Opera. I nwekwara ike ihichapụ faịlụ na sistemụ FAT16, FAT32, exFAT ma ọ bụ NTFS.
Mgbe ị na-agba ya na nke mbụ, mmemme a, nke nwere ike ime nyocha miri emi na kọmputa gị, na-achọtara gị ihe fọdụrụ na kọmputa gị nime obere oge wee jụọ gị ma ịchọrọ ihichapụ ya. Ọ bụrụ nịchọrọ ka ihichapụ data na akara akụkọ ihe mere eme gị niile, ị ga -enyerịrị nkwado dị mkpa wee malitegharịa kọmputa gị.
Mmemme a, ebe ị nwere ike kpebie ụdị faịlụ ịchọrọ ihichapụ ma ọ bụ na ọ bụghị nokpuru taabụ Windows, na -enyekwa ndị ọrụ ozi gbasara ihe omume gị niile gara aga.
Na mgbakwunye, mmemme a, nke ị nwere ike ịkọwapụta ntọala ịchọrọ iji maka ihe nchọgharị ịntanetị ọ bụla, na -amata ihe nchọgharị ịntanetị gị niile na -akpaghị aka ma nyere gị aka na arụmọrụ niile ịchọrọ ịrụ. Ihe mmemme a, nke na -enye nkwado maka adreesị webụsaịtị ị tinyegoro na mbụ, okwuntughe echekwara, faịlụ Index.dat na ọtụtụ ndị ọzọ, na -enye azịza dị irè na nke a.
Ị nwere ike ịnụ ụtọ ịrụ ọrụ na -ahapụghị akara ọ bụla site na enyemaka nke mmemme ahụ, nke na -enyekwa nkwado maka iwepu akara fọdụrụ na kọmputa gị site na ACDSee, Adobe Reader, WinRAR, Windows Media Player, BitTorrent na ọtụtụ sọftụwia ọzọ.
Eraser Nzuzo efu, nke nwekwara atụmatụ ndị ọzọ dịka ịkpụgharị faịlụ na nhichapụ data, na -enye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ dị elu.
Ana m akwadosi ike ka ị nwalee Eraser Free, ebe ị nwere ike hichapụ ma hichapụ data metụtara akụkọ ihe mere eme na kọmputa gị.
Privacy Eraser Free Ụdịdị
Nha faịlụ: 4.80 MB
Mmepụta: Cybertron Software Co., Ltd.